Inkampani yethu-iShineon Technology Co., Ltd.
Imbuyekezo Shineon Technology Co., Ltd.
I-ShineOn yipakeji ekhokelayo ye-LED kunye nesisombululo semodyuli ekhanyayo kunye nemarike yokubonisa. Yasekwa ngoJanuwari ka-2010. Yayisekwa liqela leengcali zeshishini le-elektroniki elinamava kwiinkampani zobuchwephesha zase-US. I-ShineOn ixhaswe ngamandla ziifemu ezaziwayo zase-USA nase China, kubandakanya ne-GSR, i-Northern Light Venture Capital, i-IDG-Accel Partner kunye neMayfield, kwaye ikwaxhaswa ngurhulumente kamasipala wase-Beijing.
I-ShineOn iphuhlisa umhlaba okhokele iiphakeji ze-LED kunye neemodyuli zokwenza okuphezulu, ukukhanya kwemibala ebanzi yokukhanya kweTV kunye nokukhanya okuphezulu, umthombo othembekileyo wokukhanya. I-SMD, i-COB, iipakeji ze-CSP kunye nemodyuli ehlanganisiweyo yomqhubi zisetyenzisiwe kumgangatho ophezulu weTV kunye nabathengi bokukhanya ngokubanzi.
I-ShineOn ifumene isatifikethi kwi-CNAS kunye ne-EPA kwilebhu yayo ye-LM-80. Iphumeze inkqubo ye-MES ephambili kunye ne-ERP kumgca wayo wokuvelisa kwaye iseke inkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo. Umbono wenkampani kukubonelela abathengi ngezisombululo zokhuphiswano kunye neemveliso ezinokuthenjwa, kunye nokongeza ixabiso kubathengi bayo.
I-ShineOn yathathelwa ingqalelo njengenkampani ye-Global Global tech-tech eyi-2011, kwaye yaphumelela i-2013 Red Hering Global 100 Award. Yayibizwa ngokuba yi-2014 Deloitte ephezulu ye-50 ekhulayo ngokukhawuleza kwiNkampani yeTekhnoloji eTshayina.
Emva kweminyaka yophuhliso olukhawulezileyo, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zentengiso ezikhulayo ezikumgangatho ophezulu wezixhobo zombane kunye neemodyuli, "uShineon (Nanchang) Technology Co, Ltd." yasekwa ngo-Okthobha u-2017 eNanchang. Sithatha ithuba le-R & D yase-Beijing kunye ne-internationalisation, kudityaniswa neenzuzo zommandla nezeshishini zika-Nanchang, ukukhawulezisa ukwandiswa kwesikali semveliso ekumgangatho ophezulu wokufaka izixhobo zombane kunye nezinto zemodyuli, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya nabangaphandle bemveliso ekumgangatho ophezulu weShineOn.
I-Shineon-uphawu oludumileyo lwehlabathi lweephakeji ze-LED kunye neemodyuli ezivelisa.
Yenza naliphi na amandla okwenza ngokwezifiso kwimfuno yakho.
Iminyaka eli-10 ngokuqhubekayo ekuphuhliseni amava kwiiphakheji ze-LED kunye neemodyuli zeshishini.